नेपाल आज | ‘एमसीसी’ मा प्रधानमन्त्रीको दोहोरो खेल ( भिडियोसहित)
‘एमसीसी’ मा प्रधानमन्त्रीको दोहोरो खेल ( भिडियोसहित)
शनिबार, ०३ फागुन २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफनो दुई वर्षे कार्यकालको उपलब्धीबारे संसद्लाई जानकारी गराउँदै भने, ‘ सरकारले अतिक्रमणमा परेको भूमि फिर्ता गर्छ । ’
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन सकिएपछि यही विषयमा कांग्रेसका नेता दिलेन्द्रप्रसाद वडुले पुनः प्रश्न उठाए, ‘नेपालको भूमि समेटिएको नक्शा कहिले सार्वजनिक हुन्छ ?’
जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नक्शा मात्रै किन भूमि नै फिर्ता हुन्छ ।’
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराई भन्छन्, ‘ भूमि फिर्ता गर्ने हो भने प्रक्रिया सुरु गरेको खै ? अहिलेसम्म भूमि फिर्ता गर्न सरकारले थालेको काम के हो ? कांग्रेसले त अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न सरकारलाई समर्थन गरेकौ छ त, सरकारले ढिलो किन गरिरहेको छ ? ’
प्रधानमन्त्री गफ मात्र गर्छन् अर्थात सरकारको दुई वर्ष आत्मरतिमा वितेको छ । झूठा कुरा गरेर विधिवतरुपमा सत्ता कब्जा गर्ने उनीहरुको डिजाइन हो । प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरेका आँकडा सबै गलत छन् । ती तथ्याङ्क होइनन् मिथ्याङ्क हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले भनेको सहि हो भने जनता किन यति धेरै निराश छन् ? शिक्षा स्वास्थ्य किन यति महंगो छ ? मुलुकमा भ्रष्टाचार किन घटेको छैन ?
स्वयं प्रधानमन्त्रीको पार्टीका नेताहरु सरकारले केही गर्न सकेको छैन भनेर सार्वजनिकरुपमा भनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई जबरजस्ती राम्रो गरेको छु भन्ने देखाउनु किन परेको ?
नेता भट्टराई भन्छन्, ‘ ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई प्रधानमन्त्रीले निर्दोष छन् भनेर भनेको होइन ? पौडेल निर्दोष छन् भने आज उनका छोराका नाममा भएको जग्गा किन जफत गरियो ? ’
देशभर जुनसुकै ठाउँमा जे जस्तो भ्रष्टाचार भएको छ ती सबै ठाउँमा नेकपाका नेताहरु मुछिएका छन् । कांग्रेसका नेताहरुलाई दोष दिएर उनीहरु उम्किन खोजिरहेका छन् । हरेक भ्रष्टाचारको छानबिन गरेर दोषीलाई कारवाही गर्न कसले रोक्यो ? छानबिनको नाममा आफनो पार्टीका नेता जोगाउने र विपक्षीलाई सिध्याउने प्रपञ्च त गर्नु भएन नी ?
प्रधानमन्त्रीले एमसीसीलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सरह सम्पन्न गर्ने भनेर अर्को हास्यास्पद कुरा गरेका छन् । एमसीसीप्रति त्यस्तो दृष्टिकोण हो भने पार्टीमा अध्ययन गर्ने भनेर कार्यदल किन बनाएको ? एकातर्फ कार्यदल बनाएर एमसीसीलाई विवादमा हाल्ने, अर्कोतर्फ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सरह पूरा गर्ने भनेर जनतालाई ढाँट्ने ? दोहारो चरित्र किन ?
संविधान संशोधनका मुद्दामा पनि प्रधानमन्त्रीको दोहोरो चरित्र देखिएको छ । एकातर्फ सत्ता समीकरणका लागि मधेश केन्द्रीत दलहरुसंग संविधान संशोधन गर्छु भनेर सहमति गर्ने अनि अर्कोतर्फ सर्वस्वीकार्य संविधान हो भनेर आफनै सहमति विपरित बोल्ने ? वास्तवमा भन्ने हो भने नेकपा र यसको नेतृत्व भ्रम छरेर शासन गर्नमात्र उद्धत देखिन्छ ।
ओली सरकार र नेकपा पार्टी नै राष्ट्रिय मुद्दा र भावी योजनामा अलमलमा परेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री जसरी अलमलमा परेका छन् नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि विचलित छन् ।
भट्टराई भन्छन्, ‘ मलाई त प्रचण्डप्रति टीठ लागेर आउँछ । उनले जसरी गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बदनाम गर्ने प्रयास गरे, त्यो उनको विचलित मानसिकताको उपज हो । उनले आफनो अभिव्यक्तिमार्फत कम्युनिष्ट र प्रजातन्त्रवादीको विचार तथा कार्य शैली एउटै हो भन्ने भ्रम छर्न खोजेका छन् । यस्तो काममा प्रचण्ड नलागेकै राम्रो । गिरिजाप्रसाद वा भनौ नेपाली कांग्रेसको हतियारको राजनीतिप्रति मोह छैन ।
अहिले नेकपा सरकार कानुनी बाटोबाटै सत्ता कब्जाको अभियानमा लागेको छ । सुरक्षा विधेयक, मानवअधिकार, मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि लगायतका विधेयक किन जरुरी भयो ? कानुनी तवरबाटै सरकार मुलुक कब्जा गर्ने रणनीतिमा छ भन्ने कुराको यो प्रमाण हो । यदि यही तरिकाले सरकार हिंड्ने हो भने नेकपाको पतन कसैले रोक्न सक्दैन ।